Otu esi amata ma kọmputa m bụ 32 ma ọ bụ 64 bits - VidaBytes | LifeBytes
Otu esi amata ma kọmputa m bụ 32 ma ọ bụ 64 bits
Encarni Arcoya | 30/05/2022 09:27 | Emelitere ka 31/05/2022 08:34 | Nkuzi
Were ya na ị ka zụtara nnukwu mmemme imewe. Ịchọrọ ịwụnye ya na kọmputa gị na mgbe ịlele ihe ndị a chọrọ, ị ga-achọpụta na ọ na-etinye ihe nhazi 64-bit. 64? Na ị ga-enweta oke. Kedu otu esi amata ma kọmputa m bụ 32 ma ọ bụ 64 bit? Kedu ihe dị iche n'etiti ha?
Ọ bụrụ na ị na-ajụkarị onwe gị ajụjụ ahụ ma ị maghị ya, Anyị ga-akụziri gị otu esi enweta data a, ma ị nwere Windows, Linux ma ọ bụ Mac. Ka anyị banye na ya?
1 Kedu ihe 32 ma ọ bụ 64 bit processor pụtara
2 Otu esi amata ma kọmputa m bụ 32 ma ọ bụ 64 bits
2.1 Otu esi amata ma kọmputa m bụ 32 ma ọ bụ 64 bit na Windows
2.2 Otu esi amata ma kọmputa m bụ 32 ma ọ bụ 64 bit na Linux
2.3 32 ma ọ bụ 64-bit na Mac
Kedu ihe 32 ma ọ bụ 64 bit processor pụtara
Dị ka ị maara, Otu akụkụ kachasị mkpa nke kọmpụta bụ CPU. n'ihi na ọ dị ka ọ bụ ụbụrụ ga-achịkwa ihe niile. Na nke a na-arụ ọrụ na ibe n'ibe. Mana ọ nwere ike ịkwado 32 ma ọ bụ 64. Nke a dabere na ihe ndị ọzọ.
N'ileghachi anya na mbụ, na-enweghị ihe ọmụma, ị nwere ike ịsị na 64-bit processor ga-adị mma mgbe niile karịa 32-bit. Na eziokwu bụ na ị gaghị agahie ụzọ.
N'ezie ọnụọgụ ndị a metụtara ikike kọmputa gị ịhazi ọtụtụ ozi ma ọ bụ obere. Iji nye gị echiche, ọ bụrụ na CPU gị bụ 32 ibe n'ibe, mgbe ahụ ọ pụtara na ọ ga-enwe ike hazie ihe dị ka 4.294.967.296 ụkpụrụ. Kama, ọ bụrụ na ọ bụ 64-bit, ọ ga-enwe 18.446.744.073.709.551.616. Ihe dị iche, dị ka ị na-ahụ, dị elu nke ukwuu na nke ahụ na-eme ka ọtụtụ ndị na-ahọrọ kọmputa 64-bit karịa otu 32-bit.
N'aka nke ọzọ, mgbe CPU bụ 32-bit, mgbe ahụ ọ nwere ike iji naanị 4 GB nke RAM. Ma ọ bụrụ na ọ bụ 64-bit, ị ga-enwe ike ịkwanye oke ahụ ruo 16GB nke RAM.
Nke ga-enwe ike karịa ma ọ bụ obere hazie ozi.
Ị ga-enweta arụmọrụ karịa ma ọ bụ obere.
Ị ga-ata ahụhụ ntakịrị ma ọ bụrụ na kọmputa kwụsịrị n'ihi na ọ nweghị ike ijikwa ọtụtụ ozi.
Buru n'uche na afọ na-emetụtakwa ya. N'ihe dị ka afọ 10-12, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kọmputa niile a na-ere nwere ihe nhazi 64-bit. Ma e nwere ụfọdụ ndị ka na-eji ndị 32-bit nwere mmemme na-adịghị eme ka o siere ha ike inwe obere kọmputa.
Ewezuga Apple, nke malitere site na 64 bit, ndị ọzọ niile agbanyelarị ịnye kọmpụta dị ike na ngwa ngwa.
Ugbu a ị nwere ntọala yana ịmara ihe anyị na-ekwu site na 32 ma ọ bụ 64 bit processors, oge eruola igosi gị otu ị ga-esi nweta data a na kọmputa gị.
Maka nke a, ị kwesịrị ịma na inwe Windows abụghị otu inwe Mac ma ọ bụ Linux, n'ihi na na sistemụ arụmọrụ ọ bụla data ga-adị n'otu ebe ma ọ bụ ọzọ. Ma echegbula onwe gị, n’ihi na anyị ga-enye gị igodo ha niile ka ọ ghara isiri gị ike ịchọta ya.
Otu esi amata ma kọmputa m bụ 32 ma ọ bụ 64 bit na Windows
Ka anyị malite na Windows nke, dị ka nke taa, ka bụ nke kacha eji dị ka sistemụ arụmọrụ. Dị ka ị maara, enwere ọtụtụ nsụgharị ugbu a, site na Windows 7 ruo Windows 11.
Nzọụkwụ ị ga-emerịrị iji nweta data kacha mma na nke a pụrụ ịdabere na ya gbasara kọmputa gị na ibe n'ibe o nwere nke processor bụ ndị a:
Mepee Windows File Explorer. Ebe a na kọlụm aka nri ị ga-aga Otu a. Ozugbo igosi ya, pịa ya aka nri (na-edobe cursor gị n'elu okwu ndị ahụ) menu ga-apụta.
Kpọọ akụrụngwa. Ị ga-abanyezi ihuenyo ọhụrụ. Chọta ngalaba «Nhazi» ma n'ebe ahụ ị ga-amata processor gị, ika na ihe nlereanya. Mgbe ahụ kaa akara «Systemdị sistemụ» na nke a bụ ebe ị ga-ahụ ma ọ bụrụ na kọmputa gị bụ 32 ma ọ bụ 64 bits.
Ọ dị mma ugbu a ọ nwere ike ime na kọmputa gị na-agwa gị na ọ bụ 32 bit ma n'ezie ọ bụ 64. Nke a bụ n'ihi na kọmputa 64-bit na-adakọkarị na kọmputa 32-bit, na mgbe ụfọdụ, data nke usoro ndị gara aga weghachiri adịghị mma.
Kedu ihe a ga-emezi? Nyocha abụọ. Maka ya, anyị ga-anọrịrị na nzọụkwụ gara aga.
Na ihuenyo ahụ ọ na-enye anyị, anyị ga-pịa «Ntọala sistemụ dị elu«. Nke ahụ ga-enye gị ihuenyo pere mpe nwere ọtụtụ taabụ.
Na Advanced Nhọrọ, na njedebe, pịa «Vmgbanwe gburugburu ebe obibi…». N'ebe a, ọ ga-enye anyị windo ọhụrụ ma anyị ga-achọ «PROCESSOR_ARCHITECTURE".
Na ebe a na-abịa igodo: Ọ bụrụ na ọ na-etinye gị AMD64 bụ na ị nwere kọmputa 64-bit. Ma Ọ bụrụ na ọ na-ekwu AMD86 ma ọ bụ AMDx86, gị processor bụ 32-bit..
Otu esi amata ma kọmputa m bụ 32 ma ọ bụ 64 bit na Linux
Ọ bụrụ na sistemụ arụmọrụ ị na-eji bụ Linux, usoro ndị a dị n'elu agaghị arụ ọrụ maka gị. Mana ị ga-enwe ike ịchọta data dị mfe karị. Kedu?
Kwụpụ 1: mepee ọnụ ọnụ. Ị maralarị na nke a dị ka windo MSDos.
Kwụpụ 2: Pịnye iwu: iscpu wee pịa tinye. Enwere ike ịrịọ gị maka paswọọdụ gị. nye ya ya
Nke a ga-enweta gị ntakịrị ederede na ihuenyo. Na ahịrị abụọ mbụ ọ ga-enye gị ozi ị na-achọ. Na otu ihe na-eme ebe a dị ka Windows. Ọ bụrụ na ọ na-ekwu "CPU operating modes 32-bit, 64-bit" ọ pụtara na kọmputa gị bụ 64-bit. Ma ọ bụrụ na ọ na-ekwu "32-bit CPU Operation Modes" mgbe ahụ ọ bụ naanị 32-bit.
32 ma ọ bụ 64-bit na Mac
N'ikpeazụ, anyị nwere ikpe nke Mac, eziokwu bụ na n'echiche a ọ dị mfe ịnweta data ebe ọ bụ na ị ghaghị:
IDebe taskbar gị na, ebe ị nwere akara ngosi apple Mac, pulsar.
Ugbu a, ị kwesịrị ị rụtụ aka na "Banyere Mac a" ma ọ bụ "ozi sistemụ«. Ọ ga-emeghe windo na ozi kọmputa gị, ị ga-amakwa aha processor gị. Na windo nke abụọ, na ngalaba Hardware, ga-enye gị ohere ịnweta otu data ahụ. Yabụ ị nwere ike ịma ma ọ bụ 32 ma ọ bụ 64 bit.
Yabụ ọ bụrụ na ọ dịtụla mgbe ị nọ na-eche ka ị ga-esi ama ma kọmputa m ọ bụ 32 ma ọ bụ 64 bits, ị nwetala azịza n'enweghị ike ịpị gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndụ LifeBytes » Nkuzi » Otu esi amata ma kọmputa m bụ 32 ma ọ bụ 64 bits